लिलाम नहोस् नेपालीको अस्तित्व « Loktantrapost
लिलाम नहोस् नेपालीको अस्तित्व
१२ पुष २०७५, बिहीबार ०७:५०
नेपाल भौगोलिक आधारमा पनि तराई, पहाड र हिमालको मिश्रित सम्पदाको रुपमा स्थापित छ । प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट पनि यो सानो देश, छोटो दुरीमा फरक–फरक मौसमको आनन्द लिन सकिने छुट्टै पहिचानयुक्त छ । हिमालहरुको बीचमा मुस्कुराइरहेको बिशाल गगनचुम्बी संसारकै अग्लो शिखर सगरमाथा नेपालमा नै छ । शान्तिका प्रतिक गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनु भएको हो । उहाँले देखाउनु भएको सत्यमार्ग अपनाएर अनेकौं राष्ट्रहरु बुद्धधर्म अपनाएर बौद्ध राष्ट्रको नामबाट परिचित समेत छन् ।
इतिहासमा सीता जन्मिएको पवित्र भूमि जनकपुर धार्मिक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा रामायण, महाभारत कालको प्रसिद्ध तपोभूमि तथा देवी देवताहरुको एकमात्र स्वच्छ वासस्थान पनि हो नेपाल ।
हरियाली वनपाखा, पहाड, कन्दराले अथाह दुर्लभ जडीबुटीको खानीकै रुपमा रहे पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा आज मृत सञ्जिवनीको दुःखद् पहिचान व्यहोर्नु परेको छ ।
यहाँका खोलानालाले जलस्रोतको माध्यमबाट अथाह आर्थिक लाभको सौभाग्य प्रदान गरेका छन् । रोडा र बालुवा समेत हिराको तुलनामा स्थापित छन् ।
नेपाली माटोको छुट्टै पहिचान छ । ऐतिहासिक उर्वर भूमि, कृषि प्रधान देश, खनिजको खानी र यही भूमिमा जन्मिएका बलभद्र कँुवर, भीमसेन थापा, नरे कार्कीहरु जस्ता वीर सपुतहरु यही देशले जन्माएका हुन् ।
जय गोरखकाली भन्दै नाङ्गो खुकुरी लिएर आधुनिक युगतिर लम्कदै गरेका गोला बारुदले सजिएका अङ्ग्रेजका लडाकु योद्धाहरुलाई परास्त गर्दै विजय हात पारेर गोर्खालीको नामबाट विश्वमा पहिचान स्थापित गर्न सफल भए वीर नेपाली भूमिपुत्रहरु ।
संस्कृतिको तुलनामा बहुजात जाती, भाषा भाषी र विभिन्न धर्मावलम्वीहरुले बसोबास गरेको साझा फुलबारी, अनेकन परम्परा र सांस्कृतिक झल्काउने संस्कारले ओतप्रोत भएको देश हो नेपाल ।
पर्यटकीय अवधारणामाा विश्वकै स्वर्ग मान्न सकिने प्रत्यक्ष प्रमाणहरु स्वतः स्थापित भएको एक अलौकिक छुट्टै पहिचान रहेको एकमात्र देश जो विश्व माझ छ नेपाल । कुनै पनि पाटोबाट औल्याउन नसकिने यस्तो महान देशमा बसोबास गर्ने हामी सौभाग्यशाली नेपालीको संस्कृति, संस्कार हामी र हाम्रो देशको दर्शन गर्न विश्वमा कुन चाहिँ मुलुक होला जो लालायित छैन ?
विडम्वना भनौं या दुर्भाग्य, आज हामी यस्तो विशाल देशका नागरिक विश्वको खाडी मुलुकहरुमा तल्लो तहको मजदुरी गर्नका लागि तछाड, मछाड गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आफ्नो राष्ट्रियता त्यागी सम्पन्न मुलुक युरोप, अमेरिकामा ठूलो रकम खर्चेर शरणार्थी हुँदै त्यहीको नागरिक बन्न आतुर हुने होडबाजी नै चलेको छ । निम्न वर्गका नागरिक अन्त्यमा छिमेकी मुलुक भारतमा बहादुर र कान्छा बन्न बाध्य छन् ।
भूटान जस्तो साधारण मुलुकले नेपाली नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा अनुमति दिन छाडिसक्यो । भारतका केही शहरमा नागरिकता प्रमाण पत्रको आधारमा वासको व्यवस्था मिल्दैन । छिमेकी राज्य सिक्किमसँग त रोटी बेटीको सम्बन्ध साथै अदृष्य रुपमा सिक्किमवासी भारतीयहरुको जल जमिनसँग पनि सम्बन्ध स्थापित भएको पाइन्छ नेपालमा ।
भारतस्थित सिक्किम राज्यको नवनिर्मित चारधाम र गेङटोकको भ्रमणमा जाने नेपाली पर्यटकले व्यहोर्नु परेको व्यथा परिचय पत्रको नाममा लुटिनु परेको अवस्था र प्रवेशमा रोक लगाउँदाको पीडा भोगेको महानुभावहरुलाई मात्र थाहा होला ।
आफ्नै छिमेकी राष्ट्रको सिमा नाकामा समेत व्यहोर्नु परेको दुःखद् अवस्थाको व्यथा कसले बुझ्ने ? नेपालको भूमि मिचिएको छ । नेपालीको अस्तित्व लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ । नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड केही छैन । खुल्ला र सहज नाकाको फाइदा लिदै अपराधीहरु आवतजावत गर्ने सुरक्षित वासस्थानको रुपमा प्रयोग भएको छ ।
यहाँ भारतीय अथवा नेपाली जस्ता छाला देखिने बङ्गलादेशी, भुटानी, बर्मेली कसैलाई रोकटोक, सोधपुछ हुँदैन सिमा नाकामा ।
खुल्लम् खुल्ला विना सोधपुछ, विना रोकटोक आवतजावतको सुविधा भएको एकमात्र राष्ट्र पनि होला नेपाल । छिमेकी मुलुकका त राज्यहरुमा पनि कठिनाई भोगेका सर्वविधितै छ ।
को होलान् राष्ट्रिय समस्याका जवाफदेहीहरु ? कसरी विस्थापित गर्न सकिएला यो जथाभावीतन्त्र ? कि त जन्मिएनन् कि अगाडि भनिएका ती वीर गोर्खालीका सन्तानहरु ?
हरेक विधाबाट आज देश निसासिएको छ । जनता असल अभिभावकको खोजीमा भौतारिने अवस्थामा पुगेका छन् । आ–आफै पिल्सिदै तड्पिदै छन्, अन्धकारमा विलिन हुन लाग्यो देश । भविष्यको खोजीमा हराउने अवस्थामा पुग्ने भए सन्नति ।
यहाँ विभिन्न संस्थाको नामबाट सक्रिय विदेशी दलालहरुले व्यक्ति विशेषको प्रलोभनमा पारेर हामी नेपालीको अस्तित्व नामेट पार्न खोजिरहेका छन् ।
आत्मसात गरौं हाम्रो पहिचान मात्र नेपाली हो । नेपाली भएर नेपाल आमाको अस्तित्व जोगाउँदै, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै सयौं थुँगा फुलका हामी एउाटै माला नेपाली बनेर यो पवित्र फुलबारीमा रमाउँ, समय आउँछ पर्खदैन, बगेको खोला फर्कदैन ।जवाफदेही हामी आफै हुनुपर्छ किनकि हामी नेपाली हौं ।
ट्राभल्स संघ झापा